Ride Koowheel Electric skateboard ukuya kuphi - Jomo Technology Co., Ltd
Ride Koowheel Electric skateboard ukuya kuphi
Wkisiphequluli yesimanje yokuphila ngoba iningi collar white, imisebenzi yangaphandle uyintokozo ezinhle ngesikhathi ngempelasonto. Lapha umbuzo uyaphakama: zingaba kanjani ukuya endaweni okuvunyelwene? KOOWHEEL Electric skateboard kuyoba i choice omuhle kulabo abafana imfashini kanye namantombazane. It is kusho ukuthi akudingeki ukuba uhlushwa isiminyaminya ngokuthatha edolobheni ibhasi, ngisho kude Esiteshini eziminyene. labo intsha nenzondo. Uma ukhetha isikuta skateboard, ungakwazi ukujabulela ngezimpelasonto yakho emangalisayo ukwenza lokho unesithakazelo. Ezifana Climb, Google badminto ngisho Khetha strawberry. Akukhona nje ukujabulele ngempelasonto ujabule kodwa ngcono ubuhlobo nabangani. Ngakho, Uhambo Koowheel Electric skateboard kuyoba ukukhetha ekahle. Kungani ukhetha Koowheel E-skateboard ?
Okokuqala, lokhu kuphazanyiswa kakhulu ezingabizi skateboard kagesi nge battery pack kalula replaceable. Kuye kuphela yakhelwe nge brushless, ezimbili e-wheel ihabhu motors,bluetooth control wireless esikude futhi 7 zamatshe eliqinile le-maple Canadian yokusebenza. Isivinini salo obuyisilinganiselo 40KM / h futhi ujabulele inkululeko ukuya kuphi edolobheni ukhetha kodwa aziwubhubhudli igesi noma ajulukayo kuzo zonke zihamba ngezinyawo noma ngebhayisikili. Wena ngisho angabeka esikhwameni bawuthwale kuphi, ake imisebenzi yangaphandle wedwa noma indlu ikhofi.
I Koowheel skateboard kagesi wadalwa ukucabanga elula ukuthi wonke umuntu kufanele bakwazi ukujabulela lula ukuthi ubuchwepheshe kudala. Asicabangi ukuthi skateboard kagesi nje ithoyizi okwesikhathi bokuhlela ambalwa. Esikhathini esizayo, kuyoba brand new enye indlela yokuhamba. Kuba imoto energy esisindisa. Ngokuqinisekile ukukhetha entsha ngoba esifushane beya, uya ekilasini, esitolo kanye yokuhamba bese uya ukuyothenga? Yini kungaba ludlula ukukwazi ukuhamba ngokukhululekile azungeze umuzi? Kulula ukugibela ngaphandle skateboard njalo. Ukusebenzisa elawulwa kude konke onakho ukwenze sukuma ebhodini futhi ujabulele ride.